Clubhouse App 2022 Download Ho an'ny Android [Vaovao] | APKOLL
Manana ekipa miasa amin'ny tetikasa samihafa ve ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe App Clubhouse. Io no fampiharana Android farany indrindra, izay manome rafitra fitantanana ekipa tsara indrindra araka ny tetikasa samihafa. Io no sehatra misokatra tsara indrindra, izay azon'ny fikambanana ampiasaina sy mahazo tombony amin'izany.
Misy fiaviana samihafa miasa amin'ny karazana tetikasa samihafa, amin'ny alalan'izy ireo no tian'izy ireo hanome vokatra vaovao eny an-tsena. Ny olona dia te-hampiditra vokatra iray, izay ahafahan'ny tsirairay mahazo tombony ary mahazo fidirana mora ihany koa. Ny fitantanana ny tetikasa dia matetika ahitana ekipa, izay ahitana mpikambana.
Misy fikambanana kely samy hafa, izay iarahan'ny olona samy hafa sy ananganany ekipa. Miara-miasa izy rehetra ary mahazo vokatra farany, ahafahan'izy ireo mamita asa mora foana. Ka ny fitantanana no olana. Mila tantanina ny fikambanana ary mila manavao ny satan'ny asany ny tsirairay.
Tena sarotra ny manana fahalalana momba ny fizotrany rehetra ary koa miasa. Noho izany dia eto amin'ity rindrambaiko Android mahavariana ity isika, izay ahafahan'ny mpampiasa mitantana azy rehetra. Ka te hahafantatra an'io daholo ve ianao? Avy eo mijanona miaraka aminay fotsiny ary mahazoa ny fampahalalana manan-danja rehetra mifandraika amin'ity sehatra ity.
Topimaso momba ny App Clubhouse
Izy io dia fampiharana Android Productive, izay manome sehatra hitantana ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny karazana tetikasa rehetra. Raha ny marina, io no sehatra tsara indrindra, izay ahafahan'ny mpitantana ekipa mitantana azy rehetra sy ny asany mora foana. Izy io dia manome sehatra misokatra ho an'ny mpampiasa, izay azon'ny rehetra ampiasaina sy ankafiziny.
Amin'ity sehatra ity, ny mpampiasa dia afaka mampiditra tetikasa vaovao ary manome azy ireo ho an'ny mpikambana hafa. Misy takelaka samihafa misy, izay ahafahan'ny mpampiasa manana traikefa ifandraisana bebe kokoa miaraka aminy. Manome fizarana samihafa ho an'ireo mpampiasa hahazoana ny karazana data rehetra.
Noho izany, amin'ny voalohany, ny mpampiasa dia tsy maintsy manampy mpikambana hafa amin'ity sehatra ity. Afaka manampy mpikambana mora foana ianao na aiza na aiza. Rehefa vita ny dingana fanampiny dia mila manampy tetikasa samihafa ianao. Miasa amin'ny tetikasa samihafa ny mpikambana samihafa ao amin'ny ekipanao.
Noho izany, ny mpampiasa lehibe dia mila manendry azy ireo, ny asany. Hahazo ny asany rehetra ao amin'ny dashboard ny mpikambanao. Raha vao manomboka miasa amin'izany izy ireo dia tsy maintsy mamindra ny tetikasa ho amin'ny asa an-dalam-pandrosoana. Hiseho eo amin'ny efijerin'ny mpampiasa fototra izany. Noho izany, ny lehiben'ny foibe dia ho fantatry ny mpikambana hafa miasa amin'ny tetikasa inona.
Raha vantany vao vita ny tetikasa, dia tsy maintsy asian'ireo mpampiasa azy tanteraka. Hampahafantatra ny lohan'ilay asa nampanaovina azy io. Izy io koa dia manome ny mpampiasa hifampiresaka sy hizara ny olany sy ny sosokevitra rehetra momba ilay asa.
Raha lohan'ny ekipa ianao dia manome anao mandefa mailaka koa izany. Azonao atao ihany koa ny mandahatra ireo mailaka amin'ny fotoana rehetra. Noho izany, mila miditra amin'ity rindranasa ity fotsiny ianao ary mahazo ny serivisy rehetra misy an'ity fampiharana ity. Sintomy fotsiny ny fitaovana Clubhouse For Android ary manomboka miasa amin'ny fomba mahomby kokoa.
Anaran'ny fonosana io.clubhouse.clubhouse
Manampia mpikambana ao amin'ny asa
Dashboard tsara indrindra azo
Raiso ny fanavaozana ny tetikasa rehetra
Rafitra fandaharana haingana
Sehatra fitantanana tsara indrindra
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mitsidika sehatra maro ianao ary mandany ny fotoanao. Izahay dia hizara ny dingana fampidinana haingana indrindra aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao ary manamboatra paompy tokana eo amboniny.
Clubhouse App no ​​fampiharana tsara indrindra, izay ahafahan'ny ekipa tantana mora foana sy mamita ny lahasa rehetra. Ataovy mahomby sy mahafinaritra kokoa ny asanao. Raha te hiditra amin'ireo rindranasa sy hacks mahatalanjona kokoa ianao dia tsidiho hatrany ny anay Website.
Sokajy Apps, famokarana Tags Clubhouse Apk, App Clubhouse, Clubhouse Ho an'ny Android Post Fikarohana